Volavolan-dalàna tetibola 2020: nampiakatra ny tetibolany ny Antenimierandoholona | NewsMada
Volavolan-dalàna tetibola 2020: nampiakatra ny tetibolany ny Antenimierandoholona
Lany tao amin’ny Antenimierandoholona ny volavolan-dalàna momba ny tetibola 2020. Nisy andiany valo ny fanitsiana nataon’ireo loholona tamin’izany, nifanazavana tamin’ny minisitry ny Toekarena sy ny fitantanam-bola, Randriamandrato Richard, niaraka amin’ireo mpiara-miasa akaiky aminy. Anisan’ny fanitsiana goavana nataon’ireo loholona ny famerenana ny fanampian’ny fanjakana ny Jirama, ny fanafoanana ny taha 20 % amin’ny vokatra katsaka, indrindra ny fanafoanana ny tetibola ho an’ny Antenimierandoholona, nampiakarana izany ho 34 miliara Ar ho an’ity Andrimpanjakana ity. Nifanazavana tamin’ny minisitera koa ny taha 10 % alaina amin’ny savony hafarana avy any ivelany.
Nametraka ny ahiahiny koa ny loholona sasany ny amin’ny tetibola manokana 200 miliara ariary ao anatin’io tetibolam-panjakana 2020 io. Tsy maintsy haverina hijery fanindroany ny volavolan-dalàna momba ny tetibola 2020 ny Antenimierampirenena, noho ny fanovana sasany nentin’ireo loholona. Amin’izay fizahana sy fanadihadiana fanindroany izay, manana dimy andro avy ireo Antenimiera roa. Tsy tanteraka intsony anefa izany satria tsy mahazo mihoatra ny 60 andro ny fivoriana ara-potoana eny Tsimbazaza sy eny Anosikely, nifarana omaly.
Araka ny lalàna anefa, raha tsy lany ny volavolan-dalàna momba ny tetibola mialoha ny fifaranan’ny fivoriana, azo atao ihany ny mametraka hitsivolana iray na maromaro amin’ireo fanitsiana nentin’ny Antenimiera roa tonta. Saingy, araka ny lalàna ihany, tsy voatery hanaraka ny fanitsiana nataon’ireo solombavambahoaka sy ny loholona ny governemanta.